Mhedzisiro muna Kubvumbi kurwisa kudonha kwemusika wemusika | Ehupfumi Zvemari
Iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, zvishoma zvishoma kupfuura 8% zvasara mukota yekutanga yegore. Kubva pane ino mamiriro ese, imwe yemaitiro mashoma anowanikwa kune vashoma nevepakati varimi ndeye kutora mukana wekataract yezvikwereti zvichagoverwa nemakambani akanyorwa muna Kubvumbi. Zvekuti nenzira iyi, ivo vari munzvimbo iri nani yekupa imwe mari kune yavo account yekuchengetedza. Ino inguva yakanaka yekusarudzira mubairo wevashandi. Kuburikidza ne yakatarwa uye yakavimbiswa kubhadhara Izvo zvinokubatsira iwe kurambidza kurasikirwa kwawakagadzira mumusika wemasheya kubvira kutanga kwegore.
Mari dzeSpanish hadzisi kuburikidza nenguva dzakanakisa. Ichi chinhu chakajeka uye chaunofanira kufungidzira panguva ino. Asi chokwadi chekuti Kubvumbi mwedzi unonakidza kwaari dividend kubhadhara, zvinogona kukuita iwe kuti uchinje zano rako nekutanga kwekota yechipiri yegore. Zvisinei nekushanduka kwehunhu mumisika yemari. Uye zvakare, iri inoshanda kwazvo sisitimu yekuumba inishuwarenzi zvichibva pamari yakatarwa mukati meiyo musiyano. Uine purofiti yaunogona kuwana inosvika ku7%.
Chero zvazvingaitika, chitubu chiri kuuya chemisika inofamba isina maitiro uye nekukanganisa kwakawanda mumitengo yemastock indices eUnited States. Mukati meichi chiitiko chakapihwa nevekunze equities, varimi vane pamberi pavo sarudzo yekuita mari muna Kubvumbi. Nekuti iwe unogona kunge usingazvizive, asi munguva ino varipo kusvika kumakambani mapfumbamwe akanyorwa muSpain iyo inopa vagovana mari iyi yakasarudzika mibairo. Inogona kukupa iwe mumwe mufaro kubva panguva dzino. Kana kunyangwe kugutsa chimwe chidiki diki munguva ino yechirimo yatichangotanga.
1 Ebro Chikafu chinovhura musuwo
2 Mabhangi anobhadhara avo vagovana navo
3 Mamwe matunhu anopa mubhadharo uyu
4 Zvidimbu zvidiki
5 Zvakanakira kushandisa zano iri
Ebro Chikafu chinovhura musuwo
Kune ekumuka kwekutanga, mubairo wekambani yenyika yechikafu inoitirwa. Nekuti zvirokwazvo, Chikafu cheEbro ichabhadhara 0,19 euros kune avo vanogovana navo mumazuva ekutanga aApril nechikamu kubva kune yavo mhedzisiro ya2017.Mugove wedividendi uri 0,9%, uye kunyangwe isiri imwe yepamusoro-soro mumusika wepasirose unoenderera, ichave yakanaka nzira yekutanga zano iri muhukama hwako neyakaenzana mari misika. Pachave nenguva yakawanda kumberi yekuvandudza iyi margin margins. Kusvikira wasvika zvishoma zvishoma kupfuura 7% iyo Endesa ichapa mumwedzi waChikunguru.
Kune rimwe divi, imwe yemakuru ebhuruu machipisi eSpanish equities ichabhadhara chikamu chayo muna Kubvumbi. Isu tinoreva zvikamu zveBBVA zvinopa govanisa goho 2,4%. Mukuenderana neavo vanogadzirwa kubva kune mamwe masikwereti masisitimu ayo anofamba nemari yemubereko inotangira pa2% kusvika pa3%.
Mabhangi anobhadhara avo vagovana navo
Iyi ndiyo chaiyo nyaya yeCaixabank, iyo zvakare yakasarudza Kubvumbi kubhadhara zvikwereti zvayo kune vagovana vebhangi. Mune ino kesi, inopa mubairo we0,15 euros gross pachikamu, icho chakaenzana ne53% yeiyo yakasimbiswa mambure purofiti. Kubatsira kwechikamu ichi ndeye 3,3%. Kuti upedze kutenderera uku kwezvikamu pakati pemabhangi akakosha muSpain, ino nguva yekutanga chitubu haigone kusavapo pachisungo icho Banco Sabadell chinoita kune avo vanogovana navo. Zvinoenderana nemahara eiyo yapfuura kubvira kupera kwemwedzi uno ichagovera uyu muripo kune avo vakatogovaniswa ne0,02 euros pamugove. Ndokunge, mune zvese, ivo vanogashira 0,07 euros pamugove. Hazvishamise kuti iwo wepakati pagore wedhidhi goho riri padyo padyo ne3% nhanho.
Kwapera chinguva, muna Chivabvu, ichave shanduko yemamwe emabhizimusi makuru akadai seBanco Santander, iyo ichazobhadhara varidzi vayo mugove unowirirana we0,06 euros pamugove. Mune izvo zvakagadziriswa seimwe yeiyo anotungamira zvikamu kutanga uyu mubairo panguva ino yegore. Nesarudzo iyo iwe yaunogona kusarudza iyo bhizimusi kuti iite kuchengetedza kunobatsira kubva zvino zvichienda mberi. Asi nemusiyano wakakura kuti mazuva ano uchave nekuwedzera kushomeka muaccount yako yekutarisa.
Mamwe matunhu anopa mubhadharo uyu
Kunze kwechikamu chebhangi newewo unacho dzimwe nzira kuita kuti uyu mubhadharo wakagadziriswa ubudirire gore rega. Chimwe chezvirevo ichi chinomiririrwa nekambani yemapepa eGalician Ence, iyo ichazopa 0,066 euros yakawandisa pamugovana kune vagovana pakati paApril. Ichiri chikamu chayo, kambani diki yemari yakadai seMiquel y Costas ichabhadhara chikamu chayo che0,145 euros zvakanyanya kana zvishoma pamazuva akafanana neakambotaurwa mareferensi eSpain.
Kupihwa hakuna kupera pano. Asi pane zvinopesana, iwe une dzimwe nzira dzekugamuchira huwandu hwemari kuitira kuti iwe ugone kubhadharisa imwe yeako akakosha mashandisiro. Iyi ndiyo chaiyo nyaya yekambani diki yemari Zardoya otis inozove nebasa rekubhadhara iyo yakazara 0,08 euros pamugove paakaundi yegore rino. Nekudaro, haisi imwe yeakanakisa mareti emusika ekushandisa nzira yekudyara iyi. Sezvo purofiti yegore rino yekambani iyi mumusika weSpanish unoenderera inongova 1%. Chero zvazvingaitika, imwe yeakaderera muzvikamu zveSpanish.
Kuti upedze ichi chinopa chinopa mubairo mumwedzi waKubvumbi, mamwe makambani anoonekwa anopa mubairo wakanyanya kuderera. Kusvika padanho rekuti hazvibatsiri kana chishuwo chako chiri chekuita kuti uyu mubhadharo kune vanogoverana vabatsirwe. Kwete pasina, kana ukavasarudzira, zvinofanirwa kunge zviri kuwana purofiti mukuita. Ndokunge, a mutsauko pakati pekutenga nekutengesa mutengo zvinopfuura kukosha. Mukati meiri rakasarudzika boka iri Airbus, iyo iri pakati pemwedzi uno inobhadhara mari inosvika 1,5 euros pachikamu chimwe nechimwe. Chero zvazvingaitika, inogadzira kudzoka kwegore negore kwe1,6%.
Chekupedzisira, iwe une imwe imwe nzira muzvikwereti inogona kuve inonakidza kwazvo kune zvako zvaunofarira semudhara mudiki nepakati. Tiri kureva Aena iyo parizvino iri imwe yemakambani anobatsira kwazvo kushandisa zano rekudyara iri. Nekuti zvirizvo, inopa goverano goho rinosvika mashanu% uye iro rakagadzwa mukati memwedzi uno. Iko kune, muchidimbu, sarudzo zhinji dzauinadzo muna Kubvumbi kuti uwane mibairo. Nezvakanakira zvaunogona kusarudza pakati pezvisarudzo zvakasiyana zvinouya kubva munzvimbo dzakasiyana dzemusika wemasheya uye kunyange mitsara yebhizinesi.
Zvakanakira kushandisa zano iri
Kana pakupedzisira iwe ukasarudza kuisa ino yakasarudzika system ku kukupa iwe liquidity Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuziva kuti ndeapi mabhenefiti ayo muripo wemugovana zvauchakugadzirira. Nekuti iwe uchave mune ino nguva dzakateedzana mabhenefiti iwe aunofanirwa kuziva kuti uone kana kuti kwete zvakakodzera kuenda kunyoresi iyi kune iye wemugovana. Semuenzaniso, muzviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Ichave iri muenzaniso unobatsira kwazvo we wedzera chiyero cheakaundi yako yekutarisa. Uye neiyi nzira, iva nenzvimbo yakasununguka yekutarisana neyako inotevera mari. Kana kunyangwe kukupa iyo isinganzwisisike shoma whim kubva ikozvino zvichienda mberi.
Iyo inoshanda kwazvo nzira yeku ita kuvhiya kunobatsira kubva pakutanga Zvimwe chete. Pasina kumirira kupera kwayo kuitira kuti iwe ugone kuve neinowirirana inofarira semhedzisiro yekupedzwa kwekuvhiya.
Unogona kuenda kuumba bhegi rekuchengetedza inoitirwa iyo yepakati kana yakareba nguva. Zvisinei nekuti shanduko yemitengo yavo ingave iri mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, iri zano rekuchengetedza iro rakanangana nehureme hwakatemwa hwevashambadzi vadiki nepakati.
Iwe unogona pedzisa zvinzvimbo yakatorwa mazuva mashoma mushure mekugamuchira mubhadharo wemubhadharo uyu kumugovana muakaundi yako yekutarisa. Ndicho chimwe cheakanakisa mabhenefiti aunopihwa neiyi nzira yekudyara. Beyond dzimwe technical technical nzira dzaunoshandisa nedzimwe dzakateedzana dzekuchengetedzeka muSpanish equities.
Kana iwe uri mudiki kushomeka kwemari zviwanikwa, inogona kuve mhinduro kumatambudziko emari awuinayo munguva idzodzo. Hazvishamisi kuti kumwe kudzoka kunosvika kune kufarira kusvika ku5%. Hapana chimwe chigadzirwa chemari chinokupa iwe idzi margin margins. Kwete term dhipoziti uye kunyangwe iwo anobhadhara zvakanyanya maakaundi.
Iwe haugone kukanganwa izvozvo mwedzi uno ndeimwe yeiyo yakawanda zvekugovera zvikamu. Iwe unogona kutora mukana weiyi nguva yekubatana kusarudza iyi nzira yekudyara. Kunyanya panguva iyo yepasi rese misika yemasheya isiri kuenda panguva yakanakisa yenguva. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kugadzira yakatarwa mari mukati meiyo kusiana.
Neiyi nzira, iwe unowanzo kuve uine yakanyanya kusununguka chinzvimbo kutarisana neyako inotevera mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mhedzisiro muna Kubvumbi kurwisa musika webere
Nzira yekuverenga sei kugadzirisa basa?
Musika wevashandi kuSpain